Ukubaluleka kokuBambisana kwabaThengisi kwiLockdown | Martech Zone
Ukubaluleka kokuBambisana kwabaThengisi kwiLockdown
NgoLwesibini, Oktobha 27, 2020 NgoLwesibini, Oktobha 27, 2020 Tunio Zafer
Uphononongo lwabathengisi kunye nabaphathi be-CEO ehlotyeni kwafumanisa ukuba ziipesenti ezintlanu kuphela ezingafumananga zinto zilungileyo ebomini - kwaye akukho namnye umntu owathi basilele ukufunda into ngelo xesha.
Kwaye ngokuqonda ilungisiwe ibango lomsebenzi wentengiso emva kokutshixwa kwentwasahlobo, kunjalo.
kuba xPlora, Intengiso kunye ne-arhente yedijithali esekwe eSofia, eBulgaria, amandla okwabelana ngeefayile zoyilo kunye nezinye izinto ezibonakalayo kubasebenzi kunye nethemba libonakalise kubalulekile.
Ukuba yiarhente yedijithali, ekhuselekileyo, kunye nokufikelela kwi-24/7 kwiiasethi ezibonakalayo kubalulekile kwiqela lethu. I-pCloud iyangqinelana ngokupheleleyo neemfuno zokhuseleko esizenzileyo ukufezekisa iimfuno zabathengi bethu basekuhlaleni nakwamanye amazwe.
UGeorgi Malchev, xPlora uMlawuli weQabane
Iqela leXPlora ngoku lisebenzisa pCloud, yenye yeendawo zokugcina amafu ezikhula ngokukhawuleza eYurophu kunye namaqonga okwabelana ngeefayile. Ngabathengi bamanye amazwe, ukutshixa kunike umngeni othile.
Kodwa amaqela okuthengisa kufuneka abelane njani ngeefayile ezibalulekileyo-kwaye zihlala zikhulu-ukuze zisebenze kwindawo ephezulu kwihlabathi apho i-Covid-19 iqhubeka nokwenza umonakalo omkhulu? Kukho imithetho emithathu yegolide yokugcina ukuqhubeka kweshishini ngelixa usamkela kude kunye nokusebenza okuhlanganisiweyo:
Ukuhlala uqhagamshelene kunye nokusebenza ngokudibeneyo kunye noogxa bakho ekhaya kungangqina kunzima, kwaye izinto ebezikade zilula njengokubonisa amaxwebhu omsebenzi, zibe ngumsebenzi onzima ngakumbi. Isakhono sokusebenza ngokubambisana kumaxwebhu, ezibonwayo kunye neefayile ezimanyelwayo ngokulula njengoko unokwenza kwimeko yeofisi sisitshixo sempumelelo.
Around I-60% yoluntu lwaseBritane belusebenza ekhaya okoko ukuvalwa kwe-coronavirus, nge-26% ithathe isigqibo sokuqhubeka nokusebenza isuka ekhaya ngamanye amaxesha, ikhuselekile ukwenza njalo. Nokuba ukubuyisela esiqhelweni, kuya kubakho isidingo sokuhlala uqhagamshelene nabo bangekho eofisini rhoqo kwaye bagqibe ekubeni basebenze ekhaya. Kuyafuneka ukuba nezixhobo ezifanelekileyo zokusebenzisana nabantu bonke.
Gxila kuKhuseleko lweFayile
Kubalulekile kula maxesha ungaqinisekanga ukuba wonke umntu uziva enqabisekile xa esebenzisana namaxwebhu. Oku kubandakanya ukunika abathengi intembeko kunye nabasebenzi. Kuphela kukhuseleko lomgangatho wamkhosi ovumela uxolo lwengqondo kunye nokuqinisekisa, ke kubalulekile ukuba abanini bamashishini kunye nabo bakhwela kubuchwephesha obutsha benze umsebenzi wabo wasekhaya. Kwi pCloud, Besifuna ukuhamba inyathelo eliya phambili kwaye sivumele abasebenzisi ukuba bathathe isigqibo sokuba bafuna ukugcina ulwazi lwabo ngaphakathi kweYurophu okanye eUnited States, ebavumela ukuba balungelelanise apho iifayile zabo zigcinwa ngokuxhomekeke kukhetho lomntu.
Ukusetyenziswa ngokulula yeyona mfuno inkulu yabanikezeli bokugcina ilifu. Ngawaphi amashishini awadingi kolunye uluhlu lweenkqubo kunye neenkqubo zokufunda. Isisombululo esifanelekileyo kuzo zonke izakhono zibaluleke kakhulu.
Kuqikelelwa ukuba ukuphela kwe2020, I-83% yemithwalo yemisebenzi iya kuba semafini, Ukuqaqambisa kuphela ukubaluleka kokuhlala uqhagamshele xa usabelana ngezimvo kunye nokuphuhlisa iindlela zokuthengisa, kunye nokwenza indawo yokusebenzisana. Iiarhente zentengiso, iCovid-19 ibonelele ngethuba lokufumana iinkqubo ezifanelekileyo kunye neenkqubo zokuhlangabezana 'nekamva lomsebenzi'. Lithuba abangakwaziyo ukuliphosa.
tags: fayile yokwabelanaintsebenziswano kwezentengisopcloudintsebenziswano ekudeumsebenzi okudeamandla okusebenza kude
Tunio Zafer Tuesday, October 27, 2020 Tuesday, October 27, 2020
UTunio Zafer yi-CEO ye-pCloud AG-inkampani ephuhlisayo kwaye ibonelela ngeqonga lokugcina iPCloud. Uneminyaka engaphezu kwe-18 yokulawula kunye namava okuthengisa kwicandelo lobuchwepheshe, kwaye uthathe inxaxheba kwinani leeprojekthi zeshishini ezinempumelelo ezinje ngeMTelekom, iHost.bg, iGrabo.bg, iMobile Innovations JSC nezinye. Njengenkokheli kunye nomphathi wenkampani yokugcina ilifu, uTunio ukhuthaza ukwenziwa kwezinto ezintsha kwiindawo ezinje ngokhuseleko kunye nokusebenza kweendleko zokuphelisa abasebenzisi. UTunio ukhuthaza ukucinga phambili kwiqela lakhe lonke, esebenzela ukwenza igalelo elibonakalayo kwintengiso ye-IT ekhula ngokukhawuleza, kubantu ngabanye nakwishishini ngokufanayo.
Ukuqhagamshelwa kweAudiense: Elona Platform yeNtengiso yeTwitter eShishini
Abstract: Sebenzisana, uguqulelo, kunye noHlelo lweeMveliso zakho zoYilo